Ushukela wegazi 15 okufanele ukwenze > Imibuzo
Ushukela wegazi 15 okufanele ukwenze
Isifo sikashukela yisifo okumele sibhekwe ngaso sonke isikhathi ukuze singabangeli izinkinga emzimbeni. Kuze kube manje, abanesifo sikashukela bavame ukwenza uhlolo lwegazi ngoshukela besebenzisa i-glucometer ekhethekile yeselula. Ngaphezu kwalokho, udokotela unquma ukwelashwa okudingekayo, umuthi noma i-insulin.
Uma ungathathi zinyathelo ngesikhathi futhi weqa ukwethulwa kwe-hormone emzimbeni, izinga loshukela wegazi lingagxuma kakhulu kumayunithi ayi-15 noma angama-20. Izinkomba ezinjalo ziyingozi empilweni yabanesifo sikashukela, ngakho-ke, kuyadingeka ukubona udokotela ngokushesha futhi ususe imbangela yokuphazamiseka kwesiguli.
Ukuhlelwa ngokwejwayelekile ushukela wegazi
Ngakho-ke, yini okufanele uyenze uma ushukela wegazi ukhuphuke waba ngaphezu kwama-15 nama-20 amayunithi? Ngaphandle kweqiniso lokuthi udinga usizo losizo lwezokwelashwa, kumele ubuyekeze ngokushesha lokho kudla okwenzelwe ushukela. Kungenzeka kakhulu, ushukela wegazi ugxuma kakhulu ngenxa yokudla okungafanele. Kubandakanya konke okudingeka ukwenze ukwehlisa izinga le-glucose emzimbeni, uma izinkomba zifinyelela ezingeni elibucayi.
Ukwehlisa ushukela wegazi kusuka kumayunithi ayi-15 kuye kwangama-20 kuya ezingeni elijwayelekile kungenzeka kuphela ngokudla kwe-carb ephansi. Uma umuntu onesifo sikashukela egxuma ushukela, akukho okunye ukudla okulinganiselayo okungasiza.
Izinkomba zamayunithi angama-20 noma ngaphezulu ngokuyinhloko abika ingozi esongela isiguli uma kungaqalwa ukwelashwa ngokuqinile. Ngemuva kokuhlola nokuthola imiphumela yezivivinyo, udokotela ubeka imishanguzo nokudla kokudla, okuzonciphisa ushukela wegazi kuze kufike ku-5.3-6.0 mmol / lit, okuyisiko elijwayelekile kumuntu ophilile, kubandakanya nesifo sikashukela.
Ukudla okune-carb ephansi kuzothuthukisa isimo sesiguli saluphi uhlobo lwe-mellitus yesifo sikashukela, kungakhathalekile ukuthi isiguli sinaziphi izinkinga.
Ukushintshwa kwesimo ngokwejwayelekile kwalesi simo kubhekwa vele ngosuku lwesibili noma lwesithathu ngemuva koshintsho ekudleni.
Lokhu-ke kunciphisa ushukela wegazi kusuka kumayunithi ayi-15 kuye kwangama-20 kuya ezingeni eliphansi futhi kugwema ukuthuthukiswa kwezifo zesibili ezivame ukuhambisana noshukela.
Sekuyiminyaka eminingi ngifunda inkinga yama-DIABETES. Kuyesabeka lapho abantu abaningi befa, futhi nangaphezulu bakhubazeka ngenxa yesifo sikashukela.
Ngiphuthuma ukutshela izindaba ezinhle - i-Endocrinological Research Center yaseRussia Academy yezeSayensi Yezokwelapha ikwazile ukuthuthukisa umuthi owelapha ngokuphelele isifo sikashukela i-mellitus. Okwamanje, ukusebenza kwalesi sidakamizwa kusondela ku-100%.
Ezinye izindaba ezinhle: UMnyango Wezempilo uvikele ukwamukelwa kohlelo olukhethekile olunxenxa izindleko zomuthi wonke. E-Russia kanye namazwe e-CIS abanesifo sikashukela ngaphambili Ungathola ikhambi - MAHHALA!
Ukwehluka ukudla, kufanelekile ukusebenzisa izindlela ezikhethekile zokulungiselela izitsha ezinganciphisi ushukela wegazi kuphela, kepha futhi kuthuthukise isimo somuntu nesifo sikashukela.
Ushukela wegazi ungakhuphuka ngenxa yokukhulelwa, ukucindezelwa okukhulu noma ukucindezeleka kwengqondo, zonke izinhlobo zezifo zesibili. Iphuzu elihle, uma izinga le-glucose likhuphuka liye kumayunithi angama-15 noma angama-20, singabheka iqiniso lokuthi lokhu kuyisibonakaliso sokukhulisa ukunakwa kwempilo. Imvamisa ushukela wegazi ukhuphuka uma isiguli sinokuphazamiseka kokucutshungulwa kwama-carbohydrate.
Ngakho-ke, izizathu eziphambili zokwanda kwe-glucose yegazi kuya kumayunithi angama-20 noma ngaphezulu ziyahlukaniswa:
Ukudla okungenampilo. Ngemuva kokudla, amazinga kashukela wegazi ahlala ephakeme, ngoba ngalesi sikhathi kunokusebenza okusebenzayo kokudla.
Ukuntuleka kokuzivocavoca umzimba. Noma yikuphi ukuvivinya umzimba kunomthelela omuhle kushukela wegazi.
Khulisa imizwa. Ngesikhathi sesimo esicindezelayo noma okuhlangenwe nakho okuqinile ngokomzwelo, ukugxuma ushukela kungabonakala.
Imikhuba emibi. Utshwala nokubhema kusithinta kabi isimo somzimba nokufundwa koshukela.
Izinguquko zeHormonal. Esikhathini se-premenstrual syndrome kanye nokunqamuka kokuya esikhathini kubantu besifazane, amazinga kashukela egazi anganda ngendlela ebonakalayo.
Kubandakanya izizathu kungaba yizo zonke izinhlobo zokuphazamiseka kwempilo, ezihlukaniswe ngokuya ngokuthi yiliphi ithimba elithintekile.
Izifo ze-Endocrine ngenxa yokukhiqizwa kwama-hormone angasebenzi kahle zingadala isifo sikashukela, i-pheochromocytoma, i-thyrotooticosis, isifo sikaCushing. Kulokhu, izinga likashukela likhuphuka uma inani le-hormone lenyuka.
Izifo ze-pancreatic, ezifana ne-pancreatitis nezinye izinhlobo zamathumbu, zinciphisa ukukhiqizwa kwe-insulin, okuholela ekuphazamisweni kwe-metabolic.
Ukuthatha imishanguzo ethile nakho kungadala ukwanda kweglucose yegazi. Izidakamizwa ezinjalo zibandakanya ama-hormone, ama-diuretics, okulawula ukuzalwa nezidakamizwa ze-steroid.
Isifo sesibindi, lapho i-glucose igcina khona i-glycogen, ibangela ukwanda koshukela wegazi ngenxa yokungasebenzi kahle kwesitho sangaphakathi. Izifo ezinjalo zibandakanya i-cirrhosis, i-hepatitis, isimila.
Konke okudingeka kwenziwe yisiguli uma ushukela kukhuphuka kuya kumayunithi angama-20 noma ngaphezulu ukususa izimbangela zokwephulwa kwesimo somuntu.
Vele, icala elilodwa lokukhulisa amazinga eglucose kuya emahoreni angama-15 no-20 kubantu abanempilo akuqinisekisi ukuba khona kwesifo sikashukela, kodwa kulokhu kufanele kwenziwe konke ukuze isimo singabi sibi kakhulu.
Ngokusho kwe-WHO, minyaka yonke emhlabeni abantu abayizigidi ezimbili babulawa yisifo sikashukela kanye nezinkinga zaso. Uma kungekhoxhaso olufanele lomzimba, isifo sikashukela siholela ezinhlobonhlobo zezinkinga, kancane kancane sichitha umzimba womuntu.
Izinkinga ezivame kakhulu yilezi: isifo sikashukela gangrene, nephropathy, retinopathy, trophic ulcers, hypoglycemia, ketoacidosis. Isifo sikashukela futhi kungaholela ekukhuleni kwezimila ezinomdlavuza. Cishe kuzo zonke izimo, umuntu onesifo sikashukela uyafa, ehlaselwa yisifo esibuhlungu, noma aphenduke umuntu wangempela okhubazekile.
Benzani abantu abanesifo sikashukela? Isikhungo Sokucwaninga i-Endocrinological seRussia Academy of Medical Science siye saphumelela ukwenza ithuluzi elelapha ngokuphelele isifo sikashukela.
Uhlelo lweFederal "Healthy Nation" njengamanje luyaqhubeka, ngaphakathi kohlaka lapho lo muthi unikezwa bonke abahlala eRussia Federation kanye ne-CIS - MAHHALA . Ngeminye imininingwane, bheka iwebhusayithi esemthethweni ye-MinZDRAVA.
Okokuqala, kufanelekile ukubuyekeza ukudla okudlayo, ukwenza imisebenzi ejwayelekile yokuzivocavoca. Kulokhu, zonke izinsuku udinga ukukala ushukela wegazi nge-glucometer ukugwema ukuphindeka kwesimo.
Ushukela wegazi uvame ukukalwa esiswini esingenalutho. Ukuhlolwa kwegazi kungenziwa zombili emtholampilo elabhorethri nasekhaya kusetshenziswa i-glucometer. Kubalulekile ukwazi ukuthi izinto zasendlini zivame ukumiswa kakhulu ukuthola amazinga kashukela we-plasma, ngenkathi kusegazini, inkomba izokwehliswa ngamaphesenti ayi-12.
Udinga ukwenza ukucubungula kaninginingi uma ucwaningo lwangaphambilini lubonise amazinga kashukela egazini ngaphezu kwamayunithi angama-20, kanti isiguli asitholakalanga ukuthi sinesifo sikashukela. Lokhu kuzovumela ukuvimbela ukukhula kwesifo ngesikhathi futhi kuqede zonke izimbangela zokuphazamiseka.
Uma isiguli siphakamise ushukela wegazi, udokotela angayala ukuthi kuhlolwe ushukela. okuzosiza ukucacisa uhlobo lwe-prediabetes. Imvamisa, ukuhlaziya okunjalo kubekelwa eceleni ngaphandle kokuthuthukiswa kwesifo sikashukela esigulini kanye nokuthola ukwephulwa kwe-digestibility kashukela.
Ukuhlolwa kokubekezelela i-glucose akubekelwe wonke umuntu, kepha abantu abangaphezu kweminyaka engama-40, iziguli ezikhuluphele kakhulu nalabo abasengozini yokuthola isifo sikashukela ababhekana nakho.
Ukuze wenze lokhu, isiguli sidlulisa ukuhlolwa kwegazi likashukela esiswini esingenalutho, ngemuva kwalokho sinikezwe isiphuzo sengilazi yeglue. Ngemuva kwamahora amabili, ukuhlolwa kwegazi kuphinde kuthathwe.
Ukuze uthembeke kwimiphumela etholakele, kumele kubhekwe lezi zimo ezilandelayo:
Abafundi bethu babhala
Lapho ngiba neminyaka engama-55, ngangivele ngizigwaza nge-insulin, yonke into yayimbi kakhulu. Lesi sifo saqhubeka nokukhula, ukubanjwa kokuhlaselwa ngezikhathi ezithile kwaqala, i-ambulensi ingibuyisela ezweni elilandelayo. Sonke isikhathi bengicabanga ukuthi kulokhu kuzoba okokugcina.
Konke kwashintsha lapho indodakazi yami ingivumela ukuba ngifunde i-athikili eyodwa kwi-Intanethi. Awungeke ucabange ukuthi ngimbonga kanjani. Le ndatshana ingisize ngokuphelele ukuqeda ushukela, isifo okusolakala ukuthi singelapheki. Le minyaka emibili edlule ngiqale ukuhamba ngaphezulu, entwasahlobo nasehlobo ngiya ezweni nsuku zonke, siphila impilo esebenzayo nomyeni wami, sihamba kakhulu. Wonke umuntu uyamangala ukuthi ngihambisana kanjani nakho konke, lapho kuvela khona amandla amaningi namandla, abasakholelwa ukuthi ngineminyaka engama-66 ubudala.
Isikhathi kusuka ekudleni kokugcina kuya ekuhlaziyeni kumele kudlule okungenani amahora ayishumi.
Ngaphambi kokunikela ngegazi, awukwazi ukubandakanyeka ekusebenzeni ngokomzimba okusebenzayo futhi yonke imithwalo esindayo emzimbeni kumele ingafakwa ngaphandle.
Akunakwenzeka ukuguqula ngokuqinile ukudla ngaphambi kobusuku bokuhlaziywa.
Zama ukugwema ukucindezela nokukhathazeka.
Ngaphambi kokuthi ufike ekuhlaziyeni, kunconywa ukuthi uphumule futhi ulale kahle.
Ngemuva kokuthi isixazululo seglucose siphuzile, awukwazi ukuhamba, ukubhema nokudla.
Ukulimazeka kokubekezelelwa kwe-glucose kutholakala uma ukuhlaziya kukhombisa idatha esiswini esingenalutho mayelana ne-7 mmol / ilitha nangemva kokuphuza i-glucose 7.8-11.1 mmol / lit. Uma izinkomba ziphansi kakhulu, ungakhathazeki.
Ukubona imbangela yokwanda okubukhali kweshukela egazini, udinga ukuhlolwa nge-pancreas bese uthethelela ukuhlolwa kwegazi ngama-enzyme. Uma ulandela izincomo zodokotela futhi ulandela ukudla okwelaphayo, ukufundwa koshukela kuzosimama ngokushesha.
Ngaphezu koshintsho emazingeni kashukela egazini, isiguli singase sizwe lezi zimpawu ezilandelayo:
Umlomo owomile nokoma okungapheli,
Ukukhathala, isimo esibuthakathaka nesinamandla,
Ukwanda noma, ngakolunye uhlangothi, ukuncipha kokudla, ngenkathi isisindo silahleka kakhulu noma sitholwa,
Amasosha omzimba ayancipha, ngenkathi amanxeba esiguli ephulukisa kabi,
Isiguli sizwa ikhanda elibuhlungu njalo
Umbono uyancipha kancane
Ukulunywa kuyabonakala esikhunjeni.
Izimpawu ezinjalo zikhombisa ukwanda koshukela wegazi kanye nesidingo sokuthatha izinyathelo eziphuthumayo.
Izindaba zabafundi bethu
Ukudla kokudla kwe-glucose ephezulu
Ukulawula ushukela wegazi, kunokudla okukhethekile okwelapha okuhlose ukunciphisa ukusetshenziswa kokudla okugcwele ama-carbohydrate asheshayo. Uma isiguli sinesisindo somzimba esengeziwe, kufaka phakathi nodokotela onquma ukudla okudla okuphansi kwekhalori. Kulokhu, kuyadingeka ukuphinda udle ngemikhiqizo equkethe amavithamini kanye nezakhi zomzimba.
Imenyu yansuku zonke kufanele ifake ukudla okuqukethe inani elifanele lamaprotheni, amafutha nama-carbohydrate. Lapho ukhetha izitsha, kufanele uqale ugxile etafuleni lenkomba ye-glycemic, okufanele wonke umuntu onesifo sikashukela abe nalo. Ungasusa izimpawu zesifo sikashukela kuphela ngokudla okunempilo.
Ngoshukela okhuphukile, kuyadingeka ukulungisa imvamisa yokudla okunempilo. Kunconywa ukuthi udle kaningi, kepha ngezingxenye ezincane. Kufanele kube nezidlo ezintathu eziphambili kanye nemililo emithathu ngosuku. Kodwa-ke, udinga ukudla kuphela okunempilo, ngaphandle kwama-chips, ama-crackers namanzi akhazimulayo, ayingozi empilweni.
Ukudla okusemqoka kufanele kufake imifino, izithelo nokudla kwamaprotheni. Kubalulekile futhi ukuqapha ibhalansi yamanzi. Uma izinga likashukela lihlala liphezulu, kuyadingeka ukushiya ngokuphelele ukusetshenziswa kwezitsha ze-confectionery ezimnandi, ukudla okubhemayo nokunamafutha, iziphuzo ezidakayo. Kunconyelwe futhi ukukhipha amagilebhisi, omisiwe namakhiwane ekudleni.
Ushukela Wegazi 17 - Kusho ukuthini?
Disemba 27, 2016 Ukubukwa: 8414 Amazwana: 0
Eminyakeni yamuva, izehlakalo zesifo sikashukela ziye zabonwa kaningi, futhi hhayi phakathi kwabantu abakubudala babo, kodwa naphakathi kwabantu abasha. Kunezizathu eziningi zalokhu, kodwa esinye sezizathu eziphambili ukunganaki kwempilo yomuntu nendlela yakhe yokuphila, ukuvakashela udokotela ngokungazelele, ukungazinaki izimpawu zesifo. Kwesinye isikhathi iziguli ziphendukela esikhungweni sezokwelapha lapho kuvela ukuthi kukhona ushukela wegazi ongu-17 futhi kusongela impilo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubantu abanesifo sohlobo 2.
Isifo sohlobo 1 siyimbangela yesifo se-pancreatic, ukwephulwa kokusebenza kwaso okujwayelekile. Lolu hlobo lokugula kunzima ukulelapha, futhi isiguli kufanele sithathe imijovo ejwayelekile ye-insulin noma siphuze izidakamizwa ezinciphisa ushukela, sigweme amaswidi, okunamafutha, okunezipayisi nokudla okuthosiwe ekudleni. Into esemqoka ukubala ngokunembile umthamo we-insulin ngemuva kokudla ngakunye, unikeze umzimba ukuzivocavoca okulinganiselayo - futhi lokhu kuzoqinisekisa impilo ejwayelekile. Iziguli ezinjalo azivamile ukuba noshukela wegazi 17, yize kungenzeka ukuthi ukugxuma okunjalo kwenzeke ngokudla ngokweqile nangokudla ngokungafanele i-insulin.
Ushukela Wegazi 17: Izimbangela Nemiphumela
Ungalawula i-glycemia ekhaya usebenzisa idivaysi elula ebumbene - glucometer. Uma uzizwa kabi, ungenza ukuhlolwa kwegazi ngokushesha bese ukhomba imbangela.
Yini engadala umphumela: ushukela wegazi 17 futhi yini oyingozi? Le nkomba ibhekwa njengengxaki enkulu futhi ebucayi. Ukwanda okuthe xaxa koshukela kubangela ukulimala kohlelo lwezinzwa, ukungasebenzi kahle kwenhliziyo, gxuma ekucindezelweni kwegazi. Ngenxa yalokhu, lezi zimpawu zingadala ukudinwa, ukunyamalala kwama-reflexes ajwayelekile, i-ketoacidosis, ngisho nokudangala.
I-5.0-6.5 mmol / L kubhekwa njengokujwayelekile kwe-glucose yegazi, futhi sifinyelele ngaphezulu kwe-12 kungadala ukukhula ngokushesha kwezifo zamehlo, izinso, uhlelo lwenhliziyo nezinkinga zomlenze. Kodwa akufanele uzame ngokushesha "ukwehlisa" i-glycemia ephezulu, ngoba ungavusa inkinga enkulu kakhulu - i-hypoglycemia.
Ukuze uthole ngesikhathi esifanele amazinga aphezulu kashukela egazini futhi uvikele inkomba engu-17, kudingeka uqaphele ukuthi ungaphuthelwa yizimpawu ezinjalo:
ukoma okuqatha nomlomo owomile
ukuchama njalo okungenangqondo,
ukukhathala, ukukhathala, ukozela,
ukungaphatheki kahle, ukungalingani,
ikhanda kanye nesiyezi,
isikhumba esomile esikhanyayo noma ulwelwesi lwamafinyila,
ukulala okuxakile noma ukuqwasha,
ubukhulu bokuphela, imithambo emilenzeni, umuzwa wesisindo,
isicanucanu nokuhlanza ngisho nasesiswini esingenalutho,
ukubukeka ebusweni kwamabala aphuzi nokukhula kwesikhumba.
Lezi zimpawu zingakhombisa ukuqala kwalesi sifo noma ukwanda kwe-glycemia, kufanele nakanjani sinake.
Isizathu sokubonakala kwezibonakaliso ezinjalo singaba esiningi. Ezinye zibangelwa yizinguquko ezihlobene nobudala, kanti ezinye zibangelwa yindlela yokuphila, kanti ezinye zidalwa ukwephulwa kokudla nemithi. Iqembu lengozi lifaka abantu:
onesifo sokuthola isifo sikashukela,
Ukuphila impilo yokuhlala phansi,
ngaphansi kwengcindezi engapheli, umuzwa wokuntuleka kokulala,
ubhekana nemizwa eqinile engathandeki - ulaka, ukufutheka - noma ukudangala nokunganaki,
ophathisa i-insulin ngokungafanele noma ongasebenzisi inani elifanele lomuthi,
isisindo esilahlekile noma sathola isisindo.
Uma ushukela wegazi 17 - wenzeni?
Isixazululo esilungile kunazo zonke ukubiza abezimo eziphuthumayo. Lesi yisimo esibi kakhulu. Ngoshukela wohlobo loku-1, i-lactic acid noma i-dea ekhipha ushukela ingakhula, ngesifo sikashukela sohlobo 2 - ukujula okujulile, ubuchopho kanye nokusebenza kwenhliziyo. Ukuletha lesi sifo ezweni elinjalo kuyingozi enkulu, kulula kakhulu ukwenza ukuvikela. Ukuhambisana namathiphu alula kuzovikela izingqinamba futhi kulondoloze impilo enhle.
Ukuze ulondoloze isimo esanelisayo kuyadingeka:
yezifo ezithathelwanayo kanye namakhaza, phatha ngokushesha
gwema ukubanda, ukushiswa, ukulimala,
welapha kahle izifo ezingamahlalakhona, vikela ukwanda,
landela ngokuqinile imiyalo yokondla,
yeka imikhuba emibi,
bamba iqhaza kwezemidlalo ezingabizi, uhambe kakhudlwana emoyeni omusha,
gwema izidakamizwa ze-hormonal ne-diuretic.
Unganciphisa kanjani ushukela wegazi kusuka ku-17 uye kwelejwayelekile ekhaya
Uma imitha ikhombisa i-17 noma elinye eliphakeme, ushukela wegazi udinga ukwehliswa. Ngaphezu kwalokho, ukuze izinkomba ezijwayelekile zigcinwe isikhathi eside.
Ukufeza okujwayelekile nokukugcina, odokotela banikeza izincomo eziningi.
Kuyadingeka ukuthi kuqashwe umsoco. Ukwenza ukudla kwansuku zonke, khetha ukudla okunenkomba ye-glycemic ephansi noma ephakathi. Lokhu kufaka inyama ebilisiwe nenhlanzi, ukudla kwasolwandle, ithanga, iklabishi, ukhukhamba omusha, utamatisi, ithanga, iparsley ne-celery izimpande nemifino, amakhowe, imbewu, amantongomane, ithini lamapula, ubhanana, isiqu, ulethisi, u-anyanisi kanye negalikhi , izithelo zamawolintshi. Ukudla okufana namantongomane nama-alimondi kungalawula i-glycemia, kepha ngenxa yokuqukethwe kwawo kilojoule ephezulu, kufanele kudliwe kancane.
Kuzodingeka uyeke imayonesi kanye nososo ngokususelwa kulo, ukhilimu omuncu, izitsha ezinamafutha nezithosiwe, imikhiqizo evela kufulawa kakolweni nofulawa we-premium, ama-muffin, amaswidi, izithelo ezimnandi, iziphuzo ezinekhabhoni, inyama ebhemayo namasoseji. Ingxenye yokudla yansuku zonke akufanele ihlukaniswe ngemithamo emi-3, kodwa ibe ngama-5-6.
Thatha izidakamizwa zesikhathi nezidakamizwa ezisiza ukulwa nalesi sifo. Okunye okusebenzayo kakhulu yi-decoction yama-bark ase-aspen. Kulula ukulungiselela: 1 isipuni esinegquma lamagxolo achobozekile, udinga 500 ml wamanzi. Ingxube idinga ukubiliswa isigamu sehora, ifakwe amahora ama-3, bese iba nzima. Udinga ukuthatha i-decoction ngaphambi kokudla - imizuzu engama-20-30 - 50-70 ml ngayinye. Ubhontshisi obomvu kanye no-oyela wegalikhi nakho kubhekwa njengezisombululo ezifanele ekulweni nalesi sifo.
Nikeza umzimba umthwalo olungile womzimba, ozothuthukisa isimo esejwayelekile, ususe isisindo ngokweqile futhi unciphise i-glycemia.
Ngokuhambisana nale mibandela, akudingeki wesabe ama-spikes emazingeni kashukela.
Okufanele ukwenze ngoshukela level 15 nangaphezulu
Eqa e-glycemia kuthinta kabi inhlala-kahle yenhliziyo yesiguli, kudale izinkinga futhi kungadala ukoma. Ezimweni ezinzima, lokhu kuholela ekufeni noma ukukhubazeka kweziguli. Imvamisa, ushukela oshukela uvuka ngemuva kokudla ukudla okungenampilo okuqukethe ama-carbohydrate asheshayo, anqatshelwe kwabanesifo sikashukela. Yini okufanele uyenze uma ushukela wegazi weqa izinkomba ze-9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mmol / l, yini ingozi yalesi simo futhi kungaba namiphi imiphumela?
Izimbangela ze-Hyperglycemia kubantu Abanempilo
Uma imiphumela yokuhlaziya iveze ushukela okhuphukile egazini lonke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kusho ukuthini lokhu, ukuthi sikashukela futhi hlobo luni? Kubantu abangakaze babe nesifo sikashukela, i-hyperglycemia ingabangelwa:
ukuvuvukala, umdlavuza wamanyikwe,
izifo zesistimu ye-endocrine
Ama-pathologies wesibindi wokuvuvukala: i-hepatitis, i-cirrhosis, isimila somdlavuza,
ukuthuthukiswa kohlobo I noma isifo sikashukela sohlobo 2.
Ukuqinisekisa ukutholwa, iziguli zihlolwa okwesibili okushesha kwegazi, ziqhube izifundo ezengeziwe nge-postprandial glycemia, ukubekezelelwa kweglucose. i-glycated hemoglobin, i-C-peptide. Imiphumela izosiza ekuboneni ukuthi ushukela wesiguli ukhuphuka kanjani ngaphambi nangemva kokudla, ukuthi ama-pancreas ayasebenza yini, noma ngabe i-insulin idonswa izicubu. Kungemva kwalokho kuphela lapho ngithola khona isifo sikashukela noma ngiphika. Ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa kwe-ultrasound, kunikezwa i-urinalysis ejwayelekile. Thintana nodokotela oyi-endocrinologist, oncologist, neuropathologist.
Ngokushesha lapho isiguli siya kudokotela ukuze sithole usizo, ukwelashwa kuyonqunyelwa ngokushesha futhi kuncipha ukwakheka kwezinkinga ezingenakuphindeka.
Izimbangela ze-Hyperglycemia ku Diabetesics
Kungaholela ekwandeni okukhulu kwamazinga kashukela:
ukwehluleka ukulandela ukudla kwe-carb ephansi,
ukweqa imijovo ye-insulin noma amaphilisi,
igciwane, umkhuhlane noma ezinye izifo ezihlangene,
ukuthatha imishanguzo ethile: ama-hormone, ama-diuretics, izindlela zokuvimbela inzalo,
Ushukela omningi egazini ngezinga le-10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, yini okufanele yenziwe futhi ingabe kuyingozi? Okokuqala, kuyadingeka ukuqeda izinto ezimbi ezidale ukuthi kugxume ku-glycemia. Uma isiguli sikhohlwe ukujova i-insulin esebenza ngokushesha noma siphuze umuthi, kufanele ukwenze lokhu ngokushesha okukhulu.
Awukwazi ukwephula ukudla, ngefomu elizimele le-insulin, ukusebenza ngokomzimba kuzosiza. Lokhu kuzosheshisa ukumuncwa kwe-glucose ngezicubu zemisipha.
Isizathu esivame kakhulu ukudla noma ukwephula inqubo yansuku zonke, ukudla ngokweqile. Ukulungiswa kokudla kwesiguli kuzokwazi ukuletha izinga le-glycemia ibe ejwayelekile ngaphakathi kwezinsuku ezingama-2-3.
Kungani i-insulin ingasebenzi
Kwesinye isikhathi iziguli ezinesifo sikashukela esincike kwi-insulin zibuze udokotela umbuzo: "Ngivame ukujova, futhi ushukela ugcina usezingeni le-10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 mmol / l, ukuthi wenzeni, lokho okusongela ngakho" ? Kungaba nezizathu eziningana zokungasebenzi kwe-insulin therapy:
umthamo wesidakamizwa ukhethwe ngokungalungile,
ukungahambisani nokudla nokujova,
isitoreji esingafanele se-insulin ampoules,
ukuxuba ama-insulin ahlukene kwisirinji esisodwa,
indawo yomjovo, ukwephula ubuchwepheshe,
ukuhlikihla isikhumba ngotshwala ngaphambi kokuhambisa umuthi,
ukususwa kwenaliti ngokushesha esikhunjeni sesikhumba ngemuva komjovo.
Isiguli ngasinye esinenkinga yohlobo lwesifo sikashukela esithembela ku-1, udokotela uchaza ukuthi ungawujova kanjani ngokufanele, endaweni yomzimba nezinye izinto ezibucayi. Isibonelo, ukuhlikihla isikhumba ngekhambi lotshwala kunciphisa ukusebenza komuthi, ngemuva kokufakwa i-insulin, kufanele ulinde imizuzwana eyi-10 ngaphambi kokukhipha inaliti, ngaphandle kwalokho umuthi ungahle uvuze.
Uma uhlala ujova umjovo endaweni efanayo, ifomu lezinsika, umuthi, lapho ungena endaweni enjalo, umunca kancane. Udinga ukwazi ukuthi ungazixuba kanjani izinhlobo ezahlukahlukene zemishuwalense, zazo ezingazihlanganiswa, futhi ezingekho. I-ampoule evulekile kufanele igcinwe esiqandisini.
Uma kwenzeka kuthathwa umthamo ongalungile, kubalulekile ukwenza ukulungisa, ngokubonisana nodokotela wakho. Lokhu akunakwenziwa ngokuzimela, ngoba i-hypoglycemia ingakhula. Uma isiguli singaboni kahle emehlweni futhi singakwazi ukucubungula kahle isibalo somuthi, izihlobo kufanele zicelwe usizo.
Kuyini ingozi yokwanda ushukela egazini, kungaba yini uma ushukela eku-10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30 mmol / l futhi kusho ukuthini lokhu? Ukufundwa koshukela okuphezulu, okugcinwa ezingeni elifanayo isikhathi eside, kungaholela ekwakhiweni kwe-ketoacidosis. Umzimba uzama ukusebenzisa ushukela ngokweqile ngokuphula amafutha, ngenxa yalokho kwakheka imizimba ye-ketone, nomzimba udakiwe.
ukuchama kokuqala okujwayelekile ngamanani amakhulu, bese kuba yi-anuria,
iphunga le-acetone elizwakala ngenkathi uphefumula,
isicanucanu, ukuhlanza, udonga lwesisu esishubile, ukuphazamiseka kwesitulo,
ushukela level 20, 21, 25, 26, 30 mmol / l,
imizimba ye-ketone ikhona egazini nomchamo,
Kuyadingeka ukwelapha i-ketoacidosis esimweni sesibhedlela. Ukwelashwa kwe-insulin kubekiwe, ukuswelakala koketshezi emzimbeni, i-potassium nezinye izinto zokulahleka ezingekho kuyabuyiselwa, ibhalansi ye-acid-base iyabuyiselwa.
Yini ingozi ushukela ophezulu egazini 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30 mmol / l, yini okufanele yenziwe uma kuvela izinkomba ezinjalo, futhi kungaba yini imiphumela? Ukwanda okukhulu kwe-glycemia kungaholela ekukhathazweni sikashukela (ukulahlekelwa ukwazi, ukuntuleka kokuqonda), okuvela phakathi nosuku.
i-ketoacidosis, iphunga le-acetone,
ukomiswa kolwelwesi lwe-mucous lomgogodla womlomo, isikhumba, nolimi oluhlanganiswe ne-plaque,
kwehlise ithoni yemisipha
isicanucanu, ukuhlanza, ubuhlungu besisu,
kwehlisa umfutho wegazi,
ukukhuphuka kwenhliziyo, izibuko,
kwehlisa izinga lokushisa lomzimba
i-polyuria, bese kuba i-anuria,
ukunyakaza kweglue glucose kuyakhuphuka (15 - 25, 26), imizimba ye-ketone.
Uma kunezimpawu zokuthamba, kufanele uthintane nodokotela wakho ngokushesha! Iziguli ziphathwa endaweni yokunakekelwa kakhulu.
Izinga likashukela egazini 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 mmol / l, lokhu kusongela ini? Ezigulini ezinefomu lesifo elizimele le-insulin, i-hyperosmolar coma ivame ukubonwa kakhulu, ngaphandle kwezimpawu ze-ketoacidosis. Igazi liba mnene ngenxa yokuqunjelwa ushukela omningi. Ukungenelela kokuhlinzwa, ukungasebenzi kahle kwezinso, i-pancreatitis eyingozi, ukuthatha imishanguzo ethile, ukopha, ukufakwa kwe-myocardial kungasivusela lesi sifo.
I-Hyperosmolar syndrome iba ukukhula kancane kunokuba ne-ketoacidosis, izimpawu aziphikiswa kangako. Akukho phunga le-acetone, ukuphefumula okunomsindo, ukugabha. Iziguli zikhathazwa wukuchama okuvamisile, kancane kancane umchamo uphela ungakhululwa ngenxa yokuphelelwa ngamandla komzimba. Iziguli zihlangabezana nokukhishwa inyumbazane, ukuqina kokuzenzela, ukungakwazi ukukhuluma kahle, ukunyakaza okusheshayo kwamehlo, nokukhubazeka kwamaqembu athile emisipha. Ukwelashwa kwe-hyperosmolar coma kufana neka ketoacidosis.
Izinga loshukela eliyingozi egazini (10, 20, 21, 25, 26, 27, 30 mmol / L), elihlala isikhathi eside noma ukugxuma okuvamisile ku-glycemia liholela ekukhuleni kwezinkinga ezivela ku-nerve, inhliziyo, system genitourinary system. umbono
unyawo lwesifo sikashukela
polyneuropathy yemikhawulo engezansi,
Izinkinga ezinjalo zingalapheki, ziyaqhubeka, azelapheki, ukwelashwa kuhloselwe ukugcina isiguli nokuvikela ukonakala. Izifo zingaholela ekunqunyweni kwezitho, izimpumputhe, ukuhluleka kwezinso, ukushaya kwenhliziyo, unhlangothi, ukuhlangana okuhlanganayo.
Isifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo sidinga ukulawulwa okuqinile phezu kwama-carbohydrate asetshenzisiwe, umthamo wemithi, ukuthuthukisa impilo kuyadingeka, inqubo yansuku zonke nokudla kumele kuqashelwe, futhi imikhuba emibi kufanele ishiywe. Kungale ndlela kuphela lapho isinxephezelo sesi sifo singavikeleka futhi nezinkinga ezinkulu zivinjelwe.
Uma ufunda le migqa, ungaphetha ngokuthi wena noma abathandekayo bakho bagula isifo sikashukela.
Siqhube uphenyo, safunda inqwaba yezinto zokwakha futhi sibheka izindlela eziningi nezidakamizwa ezinesifo sikashukela. Isinqumo sinje:
Uma yonke le mithi inikezwe, bekungumphumela wesikhashana nje, lapho nje ukumiswa sekumisiwe, lesi sifo siqina kakhulu.
Umuthi okuwukuphela kwawo oveze imiphumela ebalulekile yi-DIAGEN.
Okwamanje, lesi kuphela isidakamizwa esingalapha ngokuphelele isifo sikashukela. I-DIAGEN ikhombise umphumela onamandla ikakhulukazi ezigabeni zokuqala zesifo sikashukela.
Sicele uMnyango Wezempilo:
Futhi kubafundi besayithi lethu manje sekulithuba lokuthola i-DIAGEN MAHHALA!
Ukunaka! Amacala okuthengisa ama-DIAGEN fake asephenduke njalo.
Ngokubeka i-oda usebenzisa izixhumanisi ezingenhla, uyaqinisekiswa ukuthi uzothola umkhiqizo wekhwalithi kusuka kumenzi osemthethweni. Ngaphezu kwalokho, ukuthenga kuwebhusayithi esemthethweni, uthola isiqinisekiso sokubuyiselwa kwemali (kufaka nezindleko zokuhamba), uma umuthi ungenawo umphumela wokwelapha.